(Waxaa laga soo toosiyay Tchad)
Jad waa wadan oo kuyaala qaarada afrika, waxaa bari ka xiga suudaan woqooyi liibiya, galbeed niger iyo nigeria, koonfur cameron iyo central africa, waxaa koonfur galbeed ka saaran laakta tchad. caasimada wadanka waa ndjamena,
1.284,000 kilomitir kilomitir (496,000 sq mi),  Chad waa waddanka 22aad ee ugu weyn dunida. Wax yar ayey ka yar tahay Peru oo waxoogaa ka badan tan Koonfur Afrika ah   Chad wuxuu ku yaallaa waqooyiga dhexe ee Afrika, oo u dhaxeeya waddooyinka u dhaxeeya dhulalka 7 ° iyo 24 ° N, iyo 13 ° iyo 24 ° E. 
Sawiradan astronaut ayaa ka muuqda mid ka mid ah tobankii ugu badnaa oo ah harooyin biyo ah oo badan oo ku yaala xeebta Ounianga ee ku yaala wadnaha xeebta Sahara ee waqooyiga bari ee Chad. Chad waxa uu ku xiran yahay Waqooyiga Liibiya, oo ah bariga Sudan, oo galbeed ka soo jeeda Niger, Nigeria iyo Cameroon, iyo koonfurta dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika. Caasimadda waddanku waa 1,060 kilomitir (660 mi) oo ka soo jeeda dekedda ugu dhow, Douala, Cameroon.  Sababtoo ah masaafadaas oo ka timid badda iyo cimilada ugu badan ee cawska, dalka Chad waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa "Dhimashada wadnaha Africa".  Qaab-dhismeedka jirka ee ugu weyn waa wabiyaal ballaaran oo ku yaal waqooyiga iyo bariga ee xeebaha Ennedi Plateau iyo Mountain Tibs, oo ay ka mid yihiin Emi Koussi, Volcano aan wali lahayn oo gaadhaya 3,414 mitir (11,201 ft) oo ka sarreysa heerka badda. Lake Chad, ka dib markii waddanku magaciisa la yidhaahdo (oo magaciisa laga soo qaado magaca kanuri ee "harada"), waa hadhaayada haro weyn oo haysa 330,000 oo kiilomitir oo isku wareeg ah (130,000 sq m) oo ka mid ah Chad Basin 7,000 oo sano ka hor.  Inkasta oo qarnigii 21-aad uu daboolo 17,806 kilomitir oo isku-wareeg ah oo kaliya (6,875 sq m), goobteeduna waxay ku xiran tahay isbeddellada xilliyeed ee cimilada,  harada waa qoyaanka labaad ee Afrika ugu weyn 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jad&oldid=189516"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 21 Jannaayo 2019, marka ee eheed 23:33.